Thursday September 22, 2016 - 21:24:31 in Wararka by Super Admin
Gudoomiyaha Gobolka North Corlina ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xaalad bandow ah lagu soo rogay magaalada lagu magacaabo Charlotte, islamarkaana loo diray Cutuyo ka tirsan Ciidamada Meliteriga kadib markii ay halkaas ka qarxeen iska hor imaadyo u dhaxeeya Ciiamada ammaanka iyo dad dibaxayaal ah.
Iska hor imaadyadan waxay qarxeen maalintii Talaadada markii ay Ciidamada Bileyska ay toogasho ku dileen Nin Madow ah. Booliisku waxay sheegeen in ruuxaas ay toogteen markii uu diiday inuu dhigo hub uu sitay, hase yeeshee ehelladiisa ayaa arrintaas beeniyay, iyagoona sheegay in Wiilkooda markii la dilayay uusan sidan wax hub ah.
Boqollaal dibad baxayaal ah oo careysan iyo Ciidamada Booliiska ee rabshadaha ka hortaga ayaa waxay foodda isku geliyeen Waddooyinka waaweyn ee magaalada Charlotte, iyadoo Ciidamadu ay adeegsanayaan sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaasta cinjirka ka sameysan, si ay u kala ceyriyaan dibad baxayaasha.
Maamulayaasha Gobolka North Corlina ayaa sheegay in xaaladda bandow ah ay soo rogeen kadib markii dibad baxayaasha ay billaabeen inay bur buriyaan dhismayaasha ganacsiga, islamarkaana ay dab qabadsiiyaan Xarumaha dowladda ee kuyaalla magaalada Charlotte, waxayna tilmaameen in bandowgu uu socon doono illaa iyo xaaladda ay ka dagto.
Jimcihii lasoo dhaafay waxay Ciidamada Booliiska dalka Mareykanka magaalada lagu magacaabo Tolsa ay ku toogteen Wiil dhallinyara ah oo madow ah, iyadoona baaritaanno la sameeyay lagu ogaaday in ninka la dilayuusan sidan wax hub ah.
Dilka ay Ciidamada Booliiska u geystaan dadka madowga ah ee asal ahaan kasoo jeeda Qaaradda Afrika ayaa dalka Mareykanka waxay labadii sano ee lasoo dhaafay ka kiciyeen qalalaase xooggan, iyadoo ay dhaceen dibadbaxyo waaweyn oo rabshado wata oo arrinkaas looga soo horjeedo.